Al-shabaab oo jilib ku bixiyay Hub abaal Marin ah. |
Al-shabaab oo jilib ku bixiyay Hub abaal Marin ah.
Al-Shabaab ayaa abaalmarin waxa ay ubixiyeen hub iyo direes ciidan, waxaana ay siiyeen Odayaasha beelo kamid ah kuwa dega Jubbooyinka oo ay sheegeen inay dagaalka kala qeyb qaateen.
Kulan ka dhacay Degmada Jilib ee Gobalka Jubbada Dhexe oo ay Shabaab soo qaban qaabiyeen ayaa waxaa lagu abaalmariyay 8-Odayaal kuwaasi oo la sheegay inay hormuud u ahaayeen in beelahooda ay ka qeyb qaataan dagaalada ka socda Gobalada Jubbooyinka.
Guddoomiyaha Al-Shabaab u qaabilsan Gobalada Jubbooyinka Sheekh C/raxmaan Xudeyfa oo goobta ka hadlay, ayaa wuxuu sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo Odayaasha sida wanaagsan ee ay dagaalada uga qeyb qaateen, isaga oo halkaasi ka shaaciyay abaalmarinta Shabaab ay siineyso Odayaasha.
Sheekh C/raxmaan Xudeyfa oo 8-Oday oo u hadlay Beelaha qaar ee dega Jubbooyinka u yeeray ayaa madasha ku gudoonsiiyay Qoriga Ak47 iyo Direes ciidan oo nooca tuutaha ah, isaga oo usheegay Odayaasha inay tahay abaalmarinta Al-Shabaab, maadaama Odayaasha dagaalka ay ka qeyb qaateen sidoo kalena ay bixiyeen dhaqaalo iyo Xoolo.
“Inta meeshaan joogta waa intii ugu muhiimsaneyd ee dagaalka ka qeyb qaadatay oo la rabo hada kadib inay taangiga xabadka udhigtaan Odayaasha Beelaha waxa ay bixiyeen lacago iyo Xoolo intaba 8-Oday ee u hadlay Beelaha waxaan ku abaalmarinaynaa Qori Ak-47 iyo direes ciidan oo tuute ah”Ayuu yiri Guddoomiyaha Al-Shabaab ee Gobalada Jubbooyinka.
Waa markii ugu horeysay oo Al-Shabaab ay bixiyaan abaalmarin noocaan ah inta la xusuusto, waxaana ay arintani kaga gol leeyihiin Abaabulka Beelaha dega Jubbooyinka si ay ula dagaalamaan ciidamada Kenya iyo kuwa Axmed Madoobe ee Gobaladaas ku sugan.